Media Mutemo | Law & More
Kudzivirirwa kwekodzero dzekuvanzika kunova kwakanyanya kukosha munharaunda yedu iripo. Izvi zvinogona kune chikamu chikuru kuve chinofungidzirwa kuti digitalization, iko kukura uko ruzivo runowanzoitwa muchimiro chedigital. Nehurombo, digitalization inopawo njodzi. Kuti uchengetedze kuvanzika kwedu, mitemo yekuvanzika inosimbiswa.
LAW & MORE UNOGONA KUKUSHANDIRA
PANE Chero Chero KUSVANANA NEMITEMO IMITSI
Izwi renhau rinofukidza mapepanhau, terevhizheni, radio uye internet. Zvinogona kuitika kuti iwe kana kambani yako muoneke midhiya musingazivi uye nenzira isina kunaka. Munyika yedu yemazuva ano apo ruzivo rwakagovaniswa uye rwunochengeterwa pamhepo, izvi zvinogona kuramba zvichikuramba. Naizvozvo zvakakosha kutora matanho akakodzera kana uri kusangana nematambudziko enhau.
Mutemo wenhau unosanganisira ndima dzakasiyana dzemutemo. Kunyanya kutarisisa kunogona kutarisisa pamutemo we copyright, mutemo wekuvanzika uye kodzero dzenzvimbo. Mukupindura mubvunzo kana bhuku risingabvumidzwe, kodzero yako yekudzivirirwa kwekuremekedzwa uye mukurumbira inofanira kuyerwa kubva kurudyi rusununguko rwekutaura.
Panyaya yekusvibiswa kwemagetsi, zvakakosha kuti humbowo hunyorwe nenzira kwayo. Muchiitiko chemaimeri zvisiri pamutemo, zvakakosha kuti email iyi ichengetwe mune fomu yemagetsi. Uyezve, zvinokwanisika kurekodha humbowo pane bewijsonline.nl. Izvi zvinovimbisa kuti une humbowo hwakakwana.
Law & More inogona kukubatsira mune chero nyaya ine chekuita nemutemo wenhau. Magweta edu anogona kukupa mazano uye kupindura mibvunzo yako yose.
Fona +31 40 369 06 80
Isu tinoda yekusika kufunga uye tinotarisa zvinopfuura zvemutemo mamiriro ezvinhu. Izvo zviri nezve kusvika kumucheto wedambudziko uye kuzvibata icho mune chinhu chakatemwa. Nekuda kwekusafunga-kwekusagadzikana mafungiro uye makore echiitiko, vatengi vedu vanogona kuvimba neiwo pachako uye anoshanda emutemo rubatsiro.
mr. Tom Meevis, mumiriri pa Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl